Anyị bụ ndị na-emepụta ， ọbụghị onye etiti.
Hebei Besttone Fashion Co., Ltd emi odude ke Shijiazhuang, isi obodo nke Hebei Province, 280km si Beijing.
Anyị ọ bụghị naanị na anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị kamakwa ọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.Anyị nwere nnukwu mmepụta nke 150,000 n'otu kwa ọnwa. Ya mere, anyị siri ike na mmepụta, anyị nwere ike ijide n'aka ma ọ bụrụ na ị nye anyị usoro gị.
Site na ịcha, mmepụta na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa nwere akụrụngwa zuru oke nke ha. Ugbu a, m ga-egosi gị akụrụngwa iji nye gị nghọta zuru oke banyere anyị.
Nke mbụ, anyị nwere akụrụngwa ịcha akwa nke nwere ike ibelata ụfọdụ akwa akwa. .N'ihi na mgbagwoju shapes, ọ nwekwara ike wedata kpomkwem iji hụ na nke ihe eji eme ihe ma nwekwuo okike nke uwe.
Kindsdị ndebiri niile na igwe pụrụ iche nke na - eme ka ọ dịrị anyị mfe ịnagide ụdị ahịrị dị iche iche na akwa ọ bụghị naanị meziwanye arụmọrụ ịkwa akwa kamakwa ọ na - eme ka mma nke ngwaahịa a ka mma. ndebiri.
Machinesdị igwe dị iche iche na-eme ka anyị nwee ike ịme ọtụtụ ụdị, Ndị dị otú ahụ anyị jaket dị fere fere / jaket, faux fur coat / vest, jaket akpụkpọ anụ / kootu na ihe ndị ọzọ.Even nwere ike ime akwa mmiri ozuzo.
Ingpị na mbukota na lọjistik bụ ọkachamara. Ọ nwere ike ịkwado nbata nke ngwongwo gị gaa ebe a họpụtara.
2F, Successlọ Ọrụ Successga nke Ọma, OWO 22 Shiqing Road, Xinhua District, Shijiazhuang 050071, Province Hebei, China.
Maka ajụjụ ọ bụla, ajụjụ ma ọ bụ ịja mma, biko